Zube okporo ụzọ Site na Social Media | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Social Media n'ihi na ọtụtụ obere ụlọ ọrụ bụ ihe ọnụ ahịa ngwá ọrụ nke nwere ike inyere na-eto eto otu ika nkweta, ịdị adị online na n'ji nkwa. Ọ bụghị slam dunk ma ọ bụ ndozi ngwa ngwa na ọnọdụ uche anyị ji abịakwute ya ga-emetụta ọganiihu anyị ma ọ bụ ọdịda anyị.
09/23/2021 04:25 elekere GMT
Ebe a na-abịarute netwọkụ mmekọrịta n'otu ụzọ ahụ dịka mgbasa ozi ọkọlọtọ, kwenyere n'akwụkwọ na mbipụta akwụkwọ, akara ngosi na ihe ndị ọzọ, ọ ga-abụrịrị ọdịda daa. Medialọ ọrụ mgbasa ozi dabara na usoro ahịa anyị zuru oke, agbanyeghị ọ bụghị usoro anyị ga-emerịrị mgbe anyị na -ekọrịta na netwọkụ mmekọrịta.
Netwọk mmekọrịta chọrọ ngbanwe dị na usoro anyị kwenyere banyere iru nke anyị lekwasịrị ahịa. Kama inye ma na-agwa, enyemaka ya na ịnye ọnụ ahịa - ọ bụ ihe niile gbasara ahịa anyị.
Nhazi Na Ntọala siri ike
Tọ ntọala maka ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma bụrụ nke a na-aghọtahie ngwa ngwa. N'oge gara aga, nke a nwere ike ịpụtala mgbasa ozi Facebook aghụghọ, na-enweghị njikọ na ụlọ ọrụ anyị ma na-anaghị elekwasị anya na ndị na-ege anyị ntị, mepụtara iji mee ka ndị mmadụ nwee mmasị na Facebook Page ma mụbaa nọmba ndị na-akwado anyị.
GỤRỤ AHỤ Ntuziaka Na Iduzi Okporo Tozọ Na Ntanetị Ntanetị Gị ...
Dịka nọmba ndị a zụrụ / ndị na-eso ụzọ a zụrụ nọchiri anya ndị nọ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa na-enweghị mmasị ọ bụla na nke anyị ọrụ na ihe, e kwughị banyere ihe ndị anyị na-ebipụta n’ onlinentanet. Hey, ọ dị oke mma. Ka oge na-aga ma ka netwọkụ mmekọrịta na-eto eto, imirikiti n'ime anyị ekwenyela n'ezie na ndị a 'zụrụ' Fans na ndị Fans enweghị isi na-abaghị uru mgbe ọ na-echebara echiche wuru aha akara ntanetị na ụlọ ọrụ anyị.
Mgbe ị na-ele anya na mgbasa ozi mgbasa ozi nke ga-arụ ọrụ kacha mma maka nzukọ gị, buru n'uche echiche "obere karịa". Ezie na ụfọdụ ọrụ nwere ihe onwunwe (ndị mmadụ n'otu n'otu, oge, ego) iji rụọ ọtụtụ netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta, imirikiti ọrụ pere mpe enweghị. Ọ ka mma ịhọrọ ọnụọgụ nke netwọkụ dị mkpa maka ụlọ ọrụ gị, ma jikwaa ha nke ọma, karịa ịnwa ịnwe ọtụtụ azụmahịa dị iche iche, ma jikwaa ha nke ọma.
Netwọk mmekọrịta site na Sue Cockburn
Tọ ntọala maka ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma bụrụ nke a na-aghọtahie ngwa ngwa. N'oge gara aga, nke a nwere ike igosipụta mgbasa ozi Facebook na-enweghị isi, na-esonyeghị na ọrụ anyị ma na-elekwasị anya na ndị na-ege anyị ntị, kere iji mee ka ndị mmadụ nwee mmasị na Facebook Page ma melite nọmba ndị na-akwado anyị. Ka oge na-aga ma ka mgbasa ozi mmekọrịta na-eto eto, ọtụtụ n'ime anyị ekwenyela n'ezie na ndị a 'zụrụ' Fans na Fans bụ nnoo na-abaghị uru ma a bịa n'ịzụlite aha njirimara anyị n'ịntanetị na ụlọ ọrụ anyị.
Ọ bụ ezie na òtù ụfọdụ nwere ihe onwunwe (ndị mmadụ n'otu n'otu, oge, ego) iji rụọ ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta, ọtụtụ ụlọ ọrụ pere mpe enweghị. Ọ ka mma ịhọrọ ụfọdụ netwọkụ dị mkpa maka ụlọ ọrụ gị, ma jikwaa ha nke ọma, karịa ịnwa ịnwale ọtụtụ ndị dị iche iche, wee jikwaa ha nke ọma.